Global Voices teny Malagasy » Ny Nataon’i Alemaina Tamin’ireo Herero sy Nama Tao Namibia No Vonomoka Voalohany Indrindra Tamin’ny Taonjato Faha-20 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Marsa 2017 6:16 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Alemaina, Namibia, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Teratany, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary “‘Ilay Vonomoka Adino Nanjo ny Vahoaka Nama sy Herrero “, tao amin'ny YouTube
Ny 25 Novambra 2016 hatramin'ny 12 Martsa 2017 , ny Tsangambaton'i Shoah dia nanao fampirantiana iray momba ny fandripahana ireo vahoaka namibiana roa, ny Herero sy ny Nama, izay heverina amin'izao andro izao ho ny fandripahana voalohany indrindra tamin'ny tanjato faha-20. Taorian'ilay velakevitra tao Berlin tamin'ny 1884, nandritra izany ireo hery eoropeana no nizara an'i Afrika, dia i Alemaina no nitantana an'i Namibia amin'izao fotoana izao, nomeny ny anarana hoe Alemaina ao Afrika Atsimo mandra-paharesy azy ireo tamin'ny 1915.
Nandritra io fotoana io, ny 1904 hatramin'ny 1908 ny hery alemàna no nanao ady fandripahana ireo foko roa tao an-toerana ireo. Araka ny loharano maro, nisy 65 000 ny Herero ary 10 000 ny Nama  fongana nanerana ny firenena. Ankoatra izany, nalefa tany Alemaina ny sasany tamin'ny karandohan'ireo maty mba hanaovana fikarohana siantifika ho andrana hanamarinana ny lazaina fa tsy fitovian'ny foko rehetra .
Teo ambany fitarihan'ny lehibeny, Samuel Maharero, nikomy nanohitra ny fakàna ny tanin-dry zareo ireo mpikambana avy amin'ireo foko roa ireo, nanohitra ny fanolànana sy ireo fomba fitondra tsy mendrika hafa. Ady filàm-baniny no nataon-dry zareo, niafara amin'ny toedraharaha izay soritroritan'i Véronique Chemla  ao amin'ny bilaoginy :
Ny 12 Janoary 1904, « raha mbola sondriana mamono afo hamoritra ny “fihokoan” ireo Nama Bondelswartz tany atsimo ny tafika alemàna, ireo Herero tao Okahandja, nisafoaka noho ireo tsy rariny nataon'ny Zürn [Station Commander Lieutenant Ralph] sy ny famoizana tsy tapaka ny faritaniny kosa, namely ireo toerana fiompiana, fivarotana an'ireo alemàna ary ireo fotodrafitrasan'ny mpanjanaka. Niteraka famoretana feno herisetra ireny fanafihana ireny, famoretana nataon'ireo miaramila sy ireo voanjo izay niditra taminà vono olona tsy nandalo fitsaràna sy famoretana an-jambany ».
Tany Alemaina, tohin'ireo “famaritana tafahoatra ireny fanaovana herisetra ireny, nitombo nivoatra ny azo ambara ho tena tazon'ady”.
“Raha mihanaka ny herisetra, ny fitroarana eo an-toerana kosa mivadika ho fifandonana goavana, nanery ny Maharero hanatevina ny laharan'ireo “mpihoko”. Fahavoazana goavana ho an'ireo politisiana tao Berlin, fa tamin'ny voalohany dia vitan'ireny lehilahy ireny ny nanohitra ireo andian-tafik'i Leutwein [Colonial Administrator Theodor] tamin'ny fampiasàna ny tetika ady anaty akata. Nesorina tamin'ny andraikiny i Leutwein ary nosoloina an'ilay jeneraly lozabe Lothar von Trotha izay tonga tany amin'ny tanin'ireo voanjo tamin'ny Jona 1904 niaraka taminà lehilahy an'arivony maro.
Tonga tao amin'ilay toerana fonenan'ireo voanjo ny jeneraly Lothar Von Trotha narahana andian-dehilahy niisa 15 000 ary nanao famoretana tsy roa aman-tany. Ny 2 Oktobra 1904, namoaka baiko ho an'ny etamazaorony ny jeneraly Von Trotha, nandidy ny hamongorana tsy misy alaharo alaharo ireo mpikambana anatin'ireo foko roa ireo, izay toherin'ny  lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny tranonkala hgsavinagiac.com, nosoniavin'i Giacobi:
Tsy mpanompon'ny alemàna intsony ireo Hereros. Rehefa tsy manaiky ry zareo, dia ho terena amin'ny alàlan'ny fitaovampiadiana. Tsy maintsy mandao ny firenena (ry zareo), raha tsy izany, ny « groot Rohr » (tafondro goavana) no handroahako azy ao… Izay rehetra Héréro tsikaritra any anatin'ireo sisintany alemàna [namibiana] dia vonoina, na mitondra fitaovampiadiana na tsia. Ho entina miala mivoaka eto ireo vehivavy sy ankizy – na tifirina. Tsy misy lehilahy entina ho babo. Hotifirina daholo izy rehetra. Fanapahankevitra noraisina momba ny vahoaka Héréro. Tany anatin'ìreo sisintany alemàna, izay Herero mitondra na tsia fitaovampiadina, manana biby fiompy na tsia, dia ho vonoina. Tsy handray vehivavy na ankizy intsony aho. Haveriko any amin'ny azy any ry zareo, na asaiko tifirina». « Ny politikako dia ny hampihatra an'io amin'ny alàlan'ny fampihorohoroana mahery setra, na ho hatramin'ny habibiana aza. Fongoriko amin'ny rà mandriaka sy vola ireo foko mihoko. io no hany voa afafy mba hampitsiriana zavatra vaovao afaka iainana.»
Ny Aogositra 1904, nandritry ny ady tao Waterberg, voahodidina ireo Herero sy Nama, “tsy nomena safidy ankoatra ny fandosirana ho any an-tany efitr'i Kalahari izay efa nopoizinina mialoha ny toerana misy rano tao amin'ilay fairtra”. Mbola zavadoza lavitra ny tohiny :
Hamenoana ny banga dia nametrahany toerana fanarahamaso nomena baiko entitra hitifitra izay Herero hita, na lahy na vavy, na firy taona na firy taona… Vono olona ankitsirano izany, izay tombanan'ny sasany ho teo anelanelan'ny 25.000 sy 40.000 teo no namoy ny ainy (ny hafa manolotra ny tarehimarika 60 000 )
Ao amin'ny bilaogin'i Vincent Hiribarren, mpampianatra mpanao velakevitra ao amin'ny King's College London , mampianatra momba ny tantaran'i Afrika sy ny tantara amin'ny ankapobeny, tao anaty tafa iray nifanaovany tamin'i JEAN-PIERRE BAT ary navoaka tao amin'ny tranonkala libeafrica4.blogs.liberation.fr, i Leonor Faber-Jonker , mpahay tantara avy amin'ny oniversiten'i Utrecht, no manazava  ireo fomba fandringanana nampiasain'ny alemàna hanatratrarany ny tanjon-dry zareo hamongotra ny herero sy ny nama:
Raha ny marina dia efa io no politika narahan'i von Trotha, na tsy niteny aza izy, nanomboka tamin'ny fanafihany an'i Watterberg. Nandritra ilay ady, nitodi-doha nandositra tany Omaheke ireo Herero nahavita nitsoaka ny fahirano nataon'ny alemàna. Namoaka didy hanenjehana azy ireny i Von Trotha, tamin'ny fanaovana savahao ny tanety sy fanimbàna ireo toerana misy rnao. Voatosika hankany an'efitra, maty no niafaran'ireny Herero ireny, tsy ampy rano sy hanina. Tsy hoe tsy nisy vokany io hazalambo io, eny fa na ho an'ireo alemàna aza…
Feno dika avy amin'ilay didy narantiranty tamin'ny fahazoana ireo Herero, izay noterena hanatrika ny famonoana ny sasany tamin'ireo gadra naman'izy ireo nialoha ny namerenana an-dry zareo ho any an-tany efitra, mba ho afaka hijoro ho vavolombelona tamin'izay zavatra hitany sy hanakivy ireo Herero tsy hiverina.
Eny antsefentsefan'ny fangalarana tany, fanolanana vehivavy herero sy nam, dia manao fihetsika tsy mendrika ny maha-olombelona ireo voanjo. Avoitran'ny  Tsangambaton'i Shoah hoe :
Ny ankamaroan'ireo voanjo naka ny tany sy ny biby fiompin'ireo Herero dia mitondra ny Afrikàna amin'ny fomba tsy misy fanajàna na kely aza. Matetika no misy ny fanolànana, vao mainka natosiky ny tsy fahampian'ny isan'ireo vehivavy alemàna. Ny tahotra ny ho fahasimban'ny vahoaka (Volk) alemàna no farany nitondra nankamin'ny fandraràna ny fakàna vady hafa fiaviana, tamin'ny 23 Septambra 1905. Ny fahalalana tsotsotra momba ny fahasamihafàn'ny foko dia mifototra amin'ny haiolombelona momba an-dry zareo alemàna tany amin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 izay nametraka ny fanavahana ireo vahoaka lazaina fa “baribariana fahagola” sy ireo lazaina fa “nahita fandrosoana”. Niriana ny hahatakatra ny olombelona tamin'ny alàlan'ny fandinihana tsy mitanila ireo vahoaka lazaina fa “baribariana fahagola” ireo, toy ireo izay narantiranty tany amin'ireo vala fitahirizana olona (zoos humains), tena nalaza be tokoa tao Eoropa tamin'izany fotoana izany.
Vao tamin'ny 2011 no nisy 11 tamin'ireny karandoha ireny naverina tany Namibia; hatramin'ny anio, takona any ambadibandika any io vonomoka io, toy ny amborahan'ny  tranonkala Tsangambaton'i Shoah azy:
Tamin'ny 1926, voarara noho ny tombontsoan'ny fotsy tafaray ilay Blue Book (Boky Manga), tatitra ofisialy iray avy amin'ny governemanta britanika milaza ny zavanisy momba ireo habibiana nitranga tany amin'ny faritra Atsimo-Andrefan'i Afrika niadidian'ny alemàna, notontosaina fotoana fohy monja taorian'ny nakàna indray ilay tany fonenan'ny voanjo nandritry ny Ady Lehibe Voalohany. Taty aoriana, ny fomba fijerin'ny alemàna milaza ilay vonomoka ho ady an-trano no nibahana ny tontolon'ny fahatsiarovana amin'ny endriny rehetra : feno sarivongana / vato fahatsiarovana sy anarana arabe manome voninahitra ny adin'ireo alemàna.
Taorian'ny 1945, azo ambara ao Alemaina daholo izay tiana momba ny lasa teo ambany fanjanahana saingy tsy adino velively. Any amin'ny Atsimo-Andrefan'i Afrika, nanarona ny adihevitra betsaka nifanaovan'ny olona momba ny vonomoko ny fanafoanana ny fanavakavaham-bolonkoditra. An'ireo taranaky ny niharan-doza taminy sisa no nipetraka ny andraikitra fitahirizana ho velona ny tsiaro an'ilay vonomoka ary hatramin'ny fankalazàna sy ny fampitàna izany am-bava.
Na izany aza, tsy maintsy niandry hatramin'ny Jolay 2015 vao neken'ny governemanta alemàna  ny hilaza tamin'ny fomba ofisialy hoe vonomoka “ireo zavatra rehetra nitranga ” , taorian'ny naneken'ity farany ny Armeniana. Saingy tsy mbola nanolotra fialantsiny ofisialy mihitsy izy, na naneho fahavononana hanonitra, na tamin'ny endriny inona na endriny inona. Izany no nahatonga ny kaongresy iray natao tao amin'ny Ivontoerana Frantsay tao Berlin tamin'ny 14 hatramin'ny 16 Oktobra 2016 , nihaonan'ireo mpikatroka marobe avy amin'ny firenena maro mba, ankoatra ny zavatra hafa, hanamafy ny zon'ireo vondrom-piarahamonina herero sy nama ho ampidirina mivantana amin'ny fifampiraharahana hikarohana vahaolana ankapobeny, isan'izany ny fanekena ireo vonomoka, ny fanolorana fialantsiny tsy mihatsara ivelantsihy sy mety amin'ireo vondrom-piarahamonina voakasika mivantana, ka hatramin'ny fandoavana onitra mitovy ho an'ireo vondrom-piarahamonina roa izay mitohy mizaka ny vokatra ratsin'ireo vonomoka ireo.
Hatramin'ny 1990 nahatongavan'ny fahaleovantenan'i Namibia, efa an-dàlana ho tody ankehitriny ny tolona ataon'ireo taranaky ny niharan-doza, tohanan'ireo vondrona mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, indrindra fa ireo jiosy, avy any Alemaina, Etazonia, Botswana sy Afrika Atsimo mba hisian'ny fanekena ilay vonomoka, farafaharatsiny mba ho tonga hatramin'ny fandinihan'ny tribonaly ny fitarainan-dry zareo. Izay indrindra, i Laura Taylor Swain, mpitsara federaly avy any New-York, dia nandray an-tànana fitarainana iray nitorian'ireo taranaky ny niharam-doza an'i Berlin ary nametraka ny fotoam-pitsarana ho ny 21 jolay 2017 .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/22/97110/
 25 Novambra 2016 hatramin'ny 12 Martsa 2017: http://www.huffingtonpost.fr/bernard-nantet/genocide-nama-herero-namibie-allemagne/
 65 000 ny Herero ary 10 000 ny Nama: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/25/herero-et-nama-premier-genocide-du-xxe-siecle_5038156_3212.html
 ny tohiny : https://www.africavivre.com/namibie/a-voir/documentaires/namibie-le-genocide-du-iie-reich-anne-poiret.html
 no manazava: http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2017/02/26/le-genocide-des-herero-des-nama-au-memorial-de-la-shoah/
 neken'ny governemanta alemàna: http://www.lemonde.fr/international/article/2015/07/16/l-allemagne-reconnait-le-genocide-des-herero-et-des-nama-en-namibie_4685553_3210.html
 ireo zavatra rehetra nitranga: http://www.cclj.be/actu/politique-societe/allemagne-veut-excuser-officiellement-pour-genocide-en-namibie
 14 hatramin'ny 16 Oktobra 2016: http://www.berlin-postkolonial.de/cms/index.php/9-news/kurzmeldungen/124-congress-restorative-justice-after-genocide
 fotoam-pitsarana ho ny 21 jolay 2017: http://www.alvinet.com/similaires/genocide-allemand-juges/37561318